Zvinotora Nguva Yakareba Sei Kuti Ujairirwe neWiricheya Idzva
Zvinotora nguva yakareba sei kuti ushandise kune wiricheya zvinoenderana ne mhando of wiricheya uri kushandisa uye chii chako chekutanga chiitiko nacho mavhiripu zvinogona kudaro. Iwe unogona kunge wakasarudza chakakosha wiricheya kana simba wiricheya. Asi, kuva yekutanga-wheelchair mushandisi, iwe ungazowana zvakaoma kwemavhiki mashoma kujairira wiricheya. Usatombo kunetseka, hazvina kunyanyisa.
Mune ino posvo, isu tinokuudza iwe dzimwe nzira dzinoshanda dzekujaira a itsva wiricheya. Saka, ramba uchiverenga.
1. Verenga Bhuku Rekudzidzisa
Zvinoonekwa zvisina basa? Asi, kuverenga bhuku rekuraira kunogona kukubatsira zvakanyanya usati wapinda mu wiricheya. Paunenge uchiverenga bhuku racho, tarisa kune ese zvinhu uye nemabasa echigaro, kuti iwe ugone kuziva zvese nezvazvo kubva pakuipeta kusvika pakuigadzirisa.
Pinda muchigaro chako kwechinguva uye utarise kana yakagarika zvakakwana kana kuti kwete. Kunyangwe chigaro chichigona kunge chiine backrest kana cushion pachigaro, unogona kuwedzera kana kubvisa makushoni uye edza musanganiswa wakasiyana kuti uve nechokwadi chekuti chii chakanakira iwe. Izvi zvakare zvichave nechokwadi chekuti iwe une chigaro chakanyatsogadzirirwa izvo zvinokubatsira iwe mukufamba kwenguva.
3. Tevera nhungamiro
Ndichakagara mu wiricheya, iwe unofanirwa kuteedzera iri pazasi-yakapihwa nhungamiro.
Ita shuwa mabhureki aripo kuitira kuti wiricheya unogara wakanyarara pawakagara.
Peta tsoka dzekutsoka kudivi kuti ugone kupinda muchigaro zviri nyore.
Gara zvakanaka nekuisa maoko ako pazvigaro zvembama wobva wapeta tsoka dzetsoka.
4. Wakagadzirira kuenda ...
Kana wangogara pasi, wagadzirira kufamba. Kana iwe uine wiricheya yemawoko, bata zvakasimba mahandrairi uye kusunda ivo kumberi kuenda kumberi, uye kumashure kudzokera kumashure. Zvakare, bata gumbo reruboshwe kuti rimire uye fambisa vhiri rerudyi kumberi kutendeukira kuruboshwe uye ita zvakapesana chaizvo kufambisa kurudyi. Ita shuwa kuti iwe unodzidzira zvese izvi kumba usati waenda kunze.
5. Kubuda mu wiricheya...
Kuti ubude, swedera padhuze nepako chaunoda sechigaro, ita shuwa mabhureki uye peta tsoka dzetsoka kunze. Zvino, isa ruoko rwako rweruboshwe uye rwerudyi pane dzakatarisana maoko zvisundire iwe kumusoro. Pano, ungangoda rubatsiro kubuda mairi uye kuenda kunzvimbo yekuzorora.
Paunenge uchifamba-famba pachigaro chako kunze kwemba yako, ita shuwa yekudzivirira girazi kana matai anogona kubayiwa.
Maitiro ekujaira yako newiricheya nekukurumidza?
Zvinoenderana newe uye nerudzi rwechigaro, kungave uri kupinda mariri kekutanga kana kuti wakatsiva chako chekare wiricheya pamwe itsva Poshi. Zvinoenderana nemhando yekurwara kwako uye kuipa.
Kuti ujaire iyo wiricheya nekukurumidza, iwe unofanirwa kuyedza madiki anotevera.
Kushandiswa kwecushion kuchaita kuti zvive nyore kwauri kuti uchinjike pane iyo wiricheya.
Shandisa magurovhosi paunenge uchifambisa yako wiricheya kana minwe yako inogona kuwana mhoni.
Kunyanya, iwe uchafanirwa kushandisa yako yepamusoro muviri nemaoko kudzora chigaro chako. Nekudaro, kuita diki kurovedza muviri zuva nezuva ichakubatsira iwe zvakanyanya mukufamba uye kudzora yako wiricheya uye batsira kudzivirira kuipa.
Idzi ndidzo nzira dziri nyore dzekujaira a wiricheya. Asi yeuka, zvese zvaunoda kukumbundira mavhiri isimba rako rakasimba rekuda.